Google Analytics Inotangisa Data Studio (Beta) | Martech Zone
Google Analytics Inotangisa Dhata Studio (Beta)
Chitatu, Nyamavhuvhu 24, 2016 Douglas Karr
Google Analytics yakatanga Data Studio, shamwari ye analytics yemishumo yekuvaka uye madhibhodhi.
Google Data Studio (beta) inopa zvese zvaunoda kuti uchinjise dhata rako kuita akanaka, ane ruzivo ruzivo ayo ari nyore kuverenga, ari nyore kugovana, uye inogadziriswa zvizere. Data Studio inoita kuti iwe ugadzire anosvika mashanu etsika mishumo nekuganhurirwa kugadzirisa uye kugovana. Zvese zvemahara - parizvino zvinongowanikwa muUS
Google Data Studio chitsva kuona data chigadzirwa chinosanganisa data pane akawanda zvigadzirwa zveGoogle uye mamwe masosi enhoroondo - kuishandura kuita yakanaka, yekudyidzana mishumo uye madhibhodhi ane akavakirwa-mukati chaimo-nguva kubatana. Heano muenzaniso wekushambadzira.
Isu takatora mimwe michina mikuru inosangana neGoogle Analytics kuvaka mishumo yakanaka, senge Mazwi ekushambadzira, chikuva chakavakirwa vamiririri kuongorora, kugadzirisa, uye kutumira sarudzo yakajairwa yemishumo yeGoogle Analytics kune vatengi vavo. Izvi zvinoratidzika kunge zvinokwikwidza musoro nemusoro, zvichigonesa kugadziriswa kwemishumo iyo inogona kugovaniswa nyore nyore.
Pasina chishandiso, vashandisi veAnalytics vaiwanzotumira kunze iyo data vozoisundidzira mumaspredishiti kuti vabudise mishumo yakaenzana. Google Data Studio inokunda izvi, ichipa chaiyo-nguva yekuwana iri yakananga uye ine simba.
Zvimiro zveGoogle Data Studio:
Batanidza kune Google Analytics, AdWords uye mamwe masosi edata zviri nyore.
Batanidza data kubva kumaakaundi akasiyana eAnalytics nemaonero mumushumo mumwe chete.
Customize tsvarakadenga, yakagadzirirwa mishumo yekutaridzika uye kunzwa kwesangano rako.
mugove chete data raunoda kugovana nevanhu chaivo kana mapoka evashandisi.
Parizvino, iyo beta yakavhurika kune United States zvivakwa chete.
Edza Google Data Studio
Tags: analytics dhataanalytics data kuonagoogle adwordsgoogle adwords data kuonagoogle adwords inoshumagoogle analyticsgoogle analytics dhata studiogoogle datagoogle data studiogoogle data kuonaMazwi ekushambadzira
4 Zvipingamupinyi kune Inobudirira Kushambadzira Yekushandisa Implementation
Nhoroondo ye Latlon Technologies
Aug 25, 2016 pa 8: 29 AM
zvinoyevedza. Chero mamwe akakosha kana akakwidziridzwa maficha.